Netflix 'Ọ nwere onye nọ n'ime ụlọ gị' onye na -egbu egbu na -eyi nkpuchi ihu onye ọ metụtara - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Netflix's 'Enwere onye nọ n'ime ụlọ gị' onye na -egbu egbu na -eyi nkpuchi ihu onye ọ metụtara
Netflix's 'Enwere onye nọ n'ime ụlọ gị' onye na -egbu egbu na -eyi nkpuchi ihu onye ọ metụtara
Ị bụ onye iro gị kacha njọ ... yana onye na -egbu gị n'ọnọdụ ụfọdụ
by Trey Hilburn III September 13, 2021 3,112 echiche
Enwere ụfọdụ utu aha pụtara iji ziga ahụ mgbu gị. Nke a, dị ka ọtụtụ egwu egwu 70 na 80 nwere nke ahụ. Aha dị ka Abanyela na okpuru ulo or Chineke gwara m ha niile nwere mgbanaka dị egwu nye ha. Ugbu a, Netflix O nwere Onye Nọ n’ Houselọ Gị na -ekwupụta otu ihe ahụ egwu.
Trailer maka Patrick Brice's (Oke) O nwere Onye Nọ n’ Houselọ Gị bụ ebe a ka ọ na -arụ ọrụ oge ọrụ na -eme anyị obi ụtọ. Ọ nwere ihe na -egbu mmadụ nke na -enwe mmasị iyi nkpuchi nke onye ha na -egbu. Kwuo maka teknụzụ mbipụta 3D nke ọzọ. Hey, ọ bụrụ Onye ojii nwere ike ime ya, anyị nwekwara ike.
Na nchịkọta akụkọ maka O nwere Onye Nọ n’ Houselọ Gị na-aga dị ka nke a:
Makani Young si na Hawaii kwaga nwayọ, obere obodo Nebraska ka ya na nne nne ya biri ma gụchaa ụlọ akwụkwọ sekọndrị, mana ka ngụsị akwụkwọ gụchara, ụmụ akwụkwọ ibe ya na-echegbu onwe ha site n'aka onye na-egbu egbu na-ekpughe ihe nzuzo ha kachasị njọ n'obodo ahụ dum, na-atụ egwu. ndị ahụ metụtara mgbe ha na-ekpuchi ihe yiri ndụ nke ihu nke ha. Site na ihe omimi di egwu nke aka ya, Makani na ndi enyi ya aghaghi ichoputa onye ogbu mmadu tupu ha abia. E nwere onye n'ime ụlọ gị dabeere na akwụkwọ akụkọ Stephanie Perkins 'New York Times kachasị mma nke otu aha ahụ wee dee Henry Gayden (Shazam!) Maka ihuenyo ahụ, Onye nduzi ya bụ Patrick Brice (Creep) ma mepụta James Wan's Atomic Monster ( The Conjuring) na Shawn Levy 21 Laps (Ihe ndi ozo).
Patrick Brice bụ otu n'ime ndị isi ọkacha mmasị m na -arụ ọrụ taa. Nwatakịrị nwanyị ahụ dị oke mma n'akụkụ ọrụ ya. Ihe nkiri ya, Oke na usoro ya na -atụkwa egwu n'isi ha. Mana, ọrụ Brice na -enwe ụdị ọchị a kapịrị ọnụ na -agafe ọbụna oge ihe nkiri ya kachasị egwu, nke a yiri ka ọ na -eju ya afọ.
Anyị enweghị ike ichere ịhụ nke a na ihu ọma anyị agaghị eche ogologo oge! Ọ na -ada na Netflix na Ọkt. 6, na oge maka ihe ọchị Halloween.
Chọọ Cateories Họrọ Atiya 4K UHD (4) Amazon (nkiri) (7) Amazon (usoro) (12) AppleTV + (6) Rgbọ mmiri Blu (19) Egwuregwu egwu (49) Na-akpa ọchị (14) Ihe dị jụụ ịzụta (21) Ndị mara mma ị ga -eme (5) Akụkọ Ntụrụndụ (3) Facebook (usoro) (1) Akụkọ ifo (45) Ihe osise (27) Gore (24) Ebe obibi (3) HBO (ihe nkiri) (6) HBO (usoro) (7) Akwụkwọ ụjọ (63) Akụkọ Ntụrụndụ Na-adịghị Egwu (10,930) Ihe nkiri egwu (426) Usoro ụjọ (126) Horror Subgenres (10) Hulu (usoro) (6) Ajụjụ ọnụ (nkiri) (42) Ajụjụ ọnụ (usoro) (5) LGBTQ ụjọ (42) Ndepụta (ihe nkiri) (40) Nsuso (usoro) (2) Ahịa (21) Nnukwu anụ mmiri (9) Ihe nkiri ihe nkiri (2) Nyocha Nyocha (63) Ihe nkiri (15) Egwu (38) Netflix (nkiri) (32) Netflix (usoro) (46) Na-abụghị akụkọ ifo (5) Paranormal (76) Ọrịa na-atụ ụjọ (thrillers) (53) Usoro (1) Usoro nyocha (9) Shudder (nkiri) (55) Shudder (usoro) (19) Ebube (4) Iche na nke a na-adịghị ahụkebe (39) Ihe nkiri na-asọ asọ (106) Usoro gụgharia (45) Mụaka (4) Trailer (Egwuregwu) (1) Ihe nkiri (nkiri) (281) Trailer (usoro) (49) Egwuregwu egwu egwu (1) Ezi Mpụ (49) Usoro ihe onyonyo (4) Egwuregwu vidio (190) YouTube (nkiri) (3) YouTube (usoro) (13)